पहिचान सहितका अधिकार संपन्न लिम्बुवान सहितका प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ | nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeअन्तरवार्तापहिचान सहितका अधिकार संपन्न लिम्बुवान सहितका प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ
२०७७, १२ आश्विन सोमबार १८:३३ नेपाली समाचार अन्तरवार्ता 0
लिम्बुवान युवा नेता दिपक खनाल संग परदेशको पीडा र समसामयिक नेपाली राजनीति सम्बन्धित रहेर नेपाली समाचारले कुरा गरेको सम्वाद यहॉं प्रस्तुत गरिएको छ ।
सेवारो दिपक जी ।
नमस्ते सेवारो मित्र ।
कस्तो चल्दैछ कोरीयाको बसाई कस्तो छ नेपाली हरुको कोरीया को हाल को अवस्था ??
– उहीँ हो रोजिरोटी को लागि मजदुरी गरि रहेछौ । समग्रमा नेपालीहरु बहुत मेहनत गरेर देश को रेमिटेन्स र परिवारको जिबनस्तर उकास्न प्रयासरत छन ।
* कोरोना को कस्तो प्रभाब छनी ?
– संसार का देशहरु मुक्त छैनन भने कोरीया पनि उहीँ सकसले चलिरहेको छ बिश्वब्यापी रुपमा अर्थतन्त्र को प्रभाब ले कोरीयामा पनि निकै निकै सकस परिरहेछ । बाकी नेपालीहरु कोरोना बाट नै चाहिँ सुरक्षित नै छौ ।
* राजनिती कला साहित्यमा एक अब्बल मान्छे अचानक कोरीया जानुभो रहर कि बाध्यता ?
– नियती होला सायद । सबैले त्यही सोध्नु हुन्छ जवाफ छैन म संङ तर यति हो चाडै त्यही मैदान मा भेटिने छु ।
* त्यसो भए फेरि पनि तपाईलाई लिम्बुवान को राजनितिमा कलाकारीता र साहित्यमा भेट्न पाईन्छ ?
– आसा गरौं , राजनिती र साहित्य मा चाहिँ पक्का भेट हुनेछ कलाकारीता मा भन्न सक्दिन ।
* अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ के लेख्दै हुनुहुन्छ ? राजनिती कस्तो चल्दैछ ?
– समग्रमा अहिले मजदुरी गरिरहेछु । बाकी फुर्सद मा कहिले काहीँ लेख्छु , सामाजिक संजाल हरु हेर्छु देश को समाचार हरु हेर्छु यस्तै छ । राजनिती पनि उहीँ हो नजिक बाट हेरी रहेको छु ।
* केही राजनितिक कुरा कानी गरौ कि ?
– तपाईं को बिचार ।
* तपाईं त लिम्बुवान को जिल्ला उपाध्यक्ष भै सकेको मान्छे लिम्बुवान आन्दोलन लाई बिच मै छोडेर हिड्नु भो नि के पार नलागेर हो?
– त्यस्तो होइन , जब संबिधान बन्यो त्यहा लिम्बुवान खम्बुवान हुन सकेन , अब प्रक्रिया लामो भएर गयो त्यस्को लागि निकै लामो संघर्ष गर्नु पर्ने भयो जस्को लागि आफू पनि तयार हुनु पर्ने भयो तर मैदान छोडेको होइन ।
* अनि त्यसरी बिदेश मा बसेर चाहिँ लिम्बुवान हुन्छ त ?
– होइन लिम्बुवान आन्दोलन चली रहेको छ , म केही समयको लागि मात्र बाहिर छु । म नहुदैमा लिम्बुवान आन्दोलन नै हुदैन भन्ने होइन फेरि अहिले आन्दोलन गर्ने त्यस्तो ठ्याकै क्लाईम्याक्स पनि छैन । त्यो माथी कम्न्युस्ट हरु को बहुमत को शासन छ । धेरै कुरा मिल्नु पर्ने रहेछ ।
* लिम्बुवान आन्दोलन मा धेरै पटक पक्राउ पर्नु भो धेरै पटक घाइते हुनु भो अहिले कस्तो लाग्छ ?
– म जे काम गछु मन बाट लागेर गर्छु खुसी नै छु । आन्दोलन को आफ्नै सिमा हुन्न आन्दोलन र क्रान्ती मा जे पनि हुन्छ त्यही भयो तर त्यो नै आन्दोलनको अन्त्य होइन फेरि अर्को आन्दोलन त्यो भन्दा भयानक हुनेछ र त्यस्को मोर्चा सम्हाल्न म आउने छु । हिजो संघर्षशिल भएर १३ बर्स आन्दोलन मै बिताए आज पनि उस्तै जोसले काम गरि रा छु । यति भन्छु आज यहाँसम्म आउदा जो जो बाट जे जस्तो साथ पाए उहाँहरु प्रती आभरी छु ।
* तर तपाईं हरुको जोस जस्तो गरि आन्दोलन अगाडि त बडेन के कारण हो ? पार्टि बिभाजन नि भै रह्यो । यहि नेतृत्व ले लिम्बुवान तपाईहरुले भने जस्तो 10+1 प्रान्त स्थापना होलात ?
– यो अलिक गम्भीर बिसय हो । खासमा हामिले नेतृत्व प्रती अलिक बढी नै आसा गर्यौ। टुट्फुट त राजनितिमा भै रहन्छ । टुट्नु फुट्नु र फेरि मिल्नु त नेपाली राजनिती मा भै रहेको बिसय हो । तर यस्तै मात्रै आन्दोलन र यस्तै मात्र एजेन्डा हरुले चाहिँ सजिल्यै लिम्बुवान सहित 10+1 स्वायत्त राज्यहरु प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यस्को लागि साझा एजेन्डा हरु बनाउदै अलिक फराकिलो भएर सोच्नु पर्छ । पार्टिका गतिबिधी र कार्यशैली लाई केही परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
* तपाईं हरुको मुख्य एजेन्डा चाहिँ कुन हो ??
– हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र , धर्म निरपेक्ष नेपाल , पहिचान सहित का अधिकार संपन्न लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ , मगरात , नेवा , तमुवान, थारुहट, शेर्पालुङ, मधेश , खसान साथै दलित शिल्पी प्रदेश निर्माण गर्नु । ती प्रदेश हरु मा राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्नु र जनता हरु लाई बिकाशित बनाउनु स्वास्थ शिक्षा लाई निसुल्क बनाउनु तथा रोजगारी निर्माण गर्नु । र सबै जातीहरुमा सह अस्तित्ववादी समानता निर्माण गर्नु हो । प्रतक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री , मुख्यमन्त्री बनाउने । समानुपातिक तथा समाबेशीता लागू गराउने ।
* तपाईंहरु नाम कै बिसयमा किन यति सारै अडान राख्नु हुन्छ । नेपाल मा ७ प्रदेश छन यस्लाई नै स्वीकार्दा के हुन्छ ?
– मित्र नाम सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सम्झिनुस संसार का देश हरुको नाम हटाउन मिल्छ कसैले अमेरीका लाई अमेरिका होइन भन्दा अमेरीका मान्छ ? चिन लाई चिन नभन्ने मिल्छ भारत लाई भारत नभन्न मिल्छ ? नेपाल कै कुरा गरौ नाम केही होईन भने नेपाल हटाउ भन्दा तपाईं मान्नु हुन्छ म मान्छु पक्कै मान्दैनौ होला ? अर्को कुरा काङ्ग्रेस र नेकपा हरु ले चाहिँ मान्छेको नाम कै राजनिती गर्दा ठिकै छ जस्तै कम्न्युस्ट हरु काल माक्स, स्टालिन, लेलिन, माओ हुँदै मदन भण्डारी पुस्पलाल ओलि प्रचन्ड भन्दै बस्ने काङ्रेस हरु गान्धी , बि पि, गणेसमान,देउबा भन्दै बस्ने उनिहरुकै फोटो बेचेर जिन्दगी चलाउने हाम्रा गाउँ घर मा पनि उनिहरुकै सालिक र पार्क बनाउदै बस्ने अनि हामिले पहिचान को कुरा गर्दा ईतिहास को अधार मा सभ्यताको आधारमा लिम्बुवान खम्बुवान बनाउ भन्दा हामी जाती बादी भयौ? हामी देश द्रोही भयौ हामी उग्रबादी भयौ ?? यो प्रस्न गर्दा तपाईले आफ्नो नाम सम्झिनु भयो । तपाईहरुको यो प्रश्न नै गलत छ ।
* त्यसो भने लिम्बुवान भएन अब के गर्नु हुन्छ ?
– हामिले संबिधान सभाबाट प्राप्त संविधानमा लिम्बुवान बनाउने हदै सम्मका आन्दोलन गर्यौ ज्ञापनपत्र बुझायौ जुलुस गर्यौ हड्ताल गर्यौ सान्ती पुर्ण सबै आन्दोलन गर्यौ तर एकात्मक बादी हरुले पेलेर गए यस्को परिणाम त्यति राम्रो आउदैन हामी निरन्तर हाम्रा कुराहरु राखी रहन्छौ । कि उनी हरु सकिन्छन कि हामी सकिन्छौ तर यी एजेन्डाहरु रहि रहन्छन , अब यस्लाई साझा एजेन्डाको रुपमा स्थापित गर्छौ । अन्तरास्ट्रिय अदालत सम्म जान सक्छौ । अर्को तिर क्रान्ति पुर्णपनि हुन सक्छ जो बुलेट देखि ब्यालेट सम्मका आन्दोलनको तयारी गर्छौ ।
* पछिल्लो पल्ट पार्टिका अध्यक्षले अत्यान्तै आक्रामक , अभिब्याक्ती प्रधानमन्त्री लाई जुत्ता हान्छौ देखि सम्सद भवन जलाउछौ भन्नुभयो त्यस्मा तपाईंले कडा टिप्पणी गर्नु भा थ्यो नि के पार्टी मा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– पार्टी भित्र अन्तर सम्बाद हुन्छन । फरक बिचार हुन्छन । हो अध्यक्ष को त्यो कुरामा म सहमत छैन । हामी अधिकार प्राप्त गर्ने सत्ता निर्माण गर्ने संचालन गर्ने योजना सहित राजनिती मा आएका हौ कसैलाई जुत्ता हान्न होइन । मलाई आधिबासी माथी राज्यले गरेको अन्यायको आक्रोश होला भन्ने लागेको छ तर जे भए पनि अध्यक्ष को कुर्सी बाट त्यो बोल्नु मलाई सान्दर्भिक लागेन आफ्नो कुरा राखे ।
* अध्यक्षको विरुद्धमा बोल्दा कारबाही भयो भने के गर्नु हुन्छ ??
– म अन्याय नसहने मान्छे हो मलाई कसैको नजिक र टाढाको हुनु छैन । म पार्टिको सिधान्त अनुसार गलत छैन ।
यदि आफ्नो कुरा राख्दा कारबाही गरे भने सहन्छु एक आस्थावान कार्यकर्ता को नाताले तर मेरो राजनैतिक यात्रा सकिन्न म हजुरीया चाहिँ गर्दिन बिल्कुल । मलाई टिके राजनैतिक चरित्र मन पर्दैन ।
* तपाईं हरुको पार्टिको प्रबास समिती हरु पनि छन के मा हुनुहुन्छ ?
– हो हाम्रो पार्टीको २४/२५ देशमा संगठन छ । तर म अहिले पार्टिको कुनैपनि जिम्मेवार पदमा छैन । हो म कोरीया आउनु अगाडि जिल्ला कार्य समिती पान्थरको उपाध्यक्ष थिए ।
* तपाईंका नजिकैका साथीहरुले लिम्बुवान पार्टी छोड्दै छ भन्छन नि के हो कुरा दिपक जी ।
– मैले कसैसङ यस्तो कुरा गर्या छैन यो आरोप हो । लोकतन्त्रमा राजनितीमा बिचार परिवर्तन भै रहन्छ तर म हिजोपनि लिम्बुवानको कार्यकर्ता थिए आज पनि छु र भोलि पनि मेरो लिम्बुवान प्राप्ती को बिचार हुने छ बाकी जस्ले तपाईलाई त्यसो भन्यो उस्लाई सोध्नु । तर यहाँ दुइटा कुरा छन एउटा अन्तर पार्टिका मान्छेहरुले भ्रम फिजाउछन पार्टी कम्जोर बनाउन । अर्का हाम्रै पार्टी भित्रका केही साथी हरुले हाम्रो क्रीयासिलता माथी प्राहार गरेका होलान म यतिको राजनिती र रणनिती बुझ्छु । एउटै पार्टीमा बस्नु पर्छ भन्ने नै बाध्यकारी नियम राजनितीमा हुदैन जस्तै देउबा , ओलि, प्रचण्ड , बाबुरामहरु आज सम्म ४/५ वटा पार्टिमा पुगे तर बिचार र आस्था मुख्य कुरा हो ।
* त्यसो भने लिम्बुवान आन्दोलन सफल नहुनुको मुख्य कमजोरी के हो त ?
– हाम्रो समुदाय बिभाजित छ । हामिमा धैर्यता छैन । म भन्दा ठूलो कोहि छैन भन्ने सोचिहाल्छौ । पार्टिभित्र मुल्यांकन गर्ने र कार्यकर्तालाई ब्यास्थापन गर्ने परिपाटी छैन फरक मत राख्यो कि बिरोधी भै हालिन्छ । पार्टिमा कर्मठ कार्यकर्ता हरुले पाटी छोड्दासम्म हामी बेवास्था गर्छौ ।बैचारिक दृस्ठिकोण र बहस गर्ने क्षमता को कमि छ । पार्टिमा साझा एजेन्डाहरु कमजोर छन । सिधान्त अनुरुप ब्यावाहारमा लागू गर्न सकेका छैनौ । पार्टिमा बौद्धिक सर्कलका मान्छेहरु कम छौ । पार्टिले कार्यकर्ता घर फर्क को नीति लिन सकेन। अर्को तिर एकात्मक सत्ताधारीहरु हामिलाई जसरी पनि पेल्ने रणनितीमा छन। पार्टिको संरचना पनि किरात याक्थुम चुम्लुङ जस्तो अथवा आदिबाशी जनजाती महासङ जस्तो हुँदै गयो त्यसैले असर गर्यो । केही उग्र जातिबादी बिचारले पनि असर गरेको छ ।
* त्यसो भने आदिवासीहरु राजनीतिक रुपमा कमजोर छन भन्ने हो ?
– त्यस्तो होइन , तर अलिक बढी आदिवासीहरु बिभाजित चाहिँ पक्कै छन। तर यो क्रम बिस्तारै परिवर्तन हुदैछ ।नेपाल जस्तो देशमा एउटै जाती एउटै भासा एउटै समुदायका मान्छेहरुले मात्र भोट हालेर चुनाब जितिदैन । चुनाब नजिते पछि राजनितीमा स्थापित भएर आफ्नो कुरा राख्न सकिँदैन।सांसद रेशम चौधरीहरु आदिवासी भएकै कारण जेल हालियो । नवराज बिकहरु दलित भएकै कारण मारिनु पर्यो यहाँबाट हामीले अलिक धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने हो ।
* रेशम चौधरी फसाईएका हुन र?
– फसाईएको हो , नत्र उनी अपराधी भए किन चुनाब लड्न दिएको ? उनिलाई नेकपा ले र राजपाले फसाएका हुन अझ अहिले त उल्टै रअ को एजेन्ट होकि भनेर ननिकालेको रे ? आन्दोलन मा मान्छे मरे गलत हो तर नफसाको भए हिजो मनिल माङतोकको हत्या गर्नेहरु को को जेलमा छन मधेश आन्दोलनमा २०९ जना मारीए कोको जेल गए ?? अनि राज्यले जनता त्यति मार्दा न्याय हुने अनि आन्दोलनमा ६/७ जना पुलिस मर्दा चाहिँ २०/२५ जना जेल जानू पर्ने । यहि कुरा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाले भने के हुन्छ ? के नेपालमा मात्र अदालत छ यिनिहरुको ? यो रेशम चौधरी लगायत धेरै आन्दोलनकारी माथी राजनैतिक रुपमा अन्याय भएको छ । यस्को जिम्मा नेकपा सरकार र रेशम जि को पार्टी जसपा ले लिनुपर्छ ।
* बिदेशबाट नेपाली राजनितीलाई कसरी नियाल्नुहुन्छ ?
– खासमा मलाई बिदेशमा हुदा राजनैतिक कुरा गर्न आफैमा अफ्त्यारो लागि रहेछ तथापी नेपाली जनताले सोचे अनुसार दुई तिहाईको सरकारले केही गर्न सकेन नेकपा साचिकै मनोबिग्यानमा कमजोर रहेछ भन्ने लागेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीपनि छ र देशमा भने जस्तै देख्छु । जनताको हितमा काम नगरे जस्तो लाग्छ । जस्तै केही उदाहरण हुन सांसद रेशम चौधरी जेल जानू , नेकपाले भ्रष्टाचारी हरुलाई छुट दिनु, mcc जस्ता रास्ट्रघाती सम्झौता गर्नु , लिपुलेक लगायतको भुभाग फिर्ता गर्न नसक्नु, निर्मलाको बलात्कार , नवराज बिक लगायत हत्याको कुनै टुङ्गो नलाग्नु ,यी कुरालाई हेर्दा नेपाली राजनिती साचिकै फोहोरी सत्ताबादी जस्तो लाग्छ । हामी कमजोर नेतृत्व को हातमा देश छोडेर हिडेछौ जस्तै लाग्छ ।
* अन्त्यमा केही भन्नू हुन्छ ?
केही कुरा राख्ने अवसर दिनु भयो त्यस्का लागि धन्यवाद अन्त्यमा म लिम्बुवानको माटोमा चाडै फर्कने छु । यहाँ हरुको माया साथ समर्थन सदैब पाई रहु । लिम्बुवान हु , नेपाली हु भन्ने गहिरो छाप मनमा छदैछ । आउदै गरेका महान चाड पर्वहरुको लिम्बुवान बाशी तथा नेपाली दाजु भाइ दिदिबैनीहरुमा सुभकामना अर्पण गर्दछु । कोरोनाको असरबाट सबै जना सकेसम्म सुरक्षित रहनु होला । सुखदुखमा कला साहित्य राजनिति र समाजसेवामा यहाँ हरु सङै हुने छु ।
धन्यवाद जय लिम्बुवान ।
कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमबाट गणित विषयलाई हटाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन